Nkpuru ahihia bilitere Eddie Mitchell di iche-iche: otu esi aku nkpuru ma lekọta ohia - Osisi - 2020
Rose Eddy Mitchell - nkọwa nke ọkwa
Rose bụ ifuru kachasị mma ma mara mma n’ụwa. E nwere ọtụtụ ụdị na ụdị ụdị osisi a mara mma. Otu n’ime ha nwere aha mara mma Eddie Mitchell. Mana njiri mara nke ụdị dị iche iche.
Rose Eddy Mitchell (Eddy Mitchell) - ụdị ụdị dị iche iche, akụkọ banyere okike
Rose Eddie Mitchell bu ozuzu nkpuru nke sitere na tii na ndozi ndo. Ọ nwere myirịta na Roses Grand Amore na Grandiflora. Varietydị ahụ dị obere nke ukwuu, bred na France na 2008. Akpọrọ ya aha onye France na onye na-eme ihe nkiri Eddie Mitchell.
Isi ihe dị na osisi ahụ
Rose Eddie Mitchell: Nkọwa, Nkọwa
A na-ese ifuru ifuru ndị dị n'ime ya na ọmarịcha agba agba, na mpụta ifuru ya yiri ọla edo.
Ifuru ahihia di iche-iche a buru ibu buru ibu, dayameta ha ruru 12 centimita. N'oge okooko osisi, okooko osisi na-esi ísì ụtọ. Ihe dị ka otu nwa osisi nwere ike ịdị n’otu okporo ahịhịa. Ọzọkwa, akwụkwọ ya na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ.
Oke ohia tolitere nwere ike itolita 50cm na elu ma rukwa 40cm.
Tupu okooko osisi, okooko osisi na-acha akwụkwọ ndụ nwere ọdịdị nke iko. N'oge okooko osisi, ọ na-emepe, na-ekpughe etiti. Petals n'oge okooko osisi nwere agba aja aja.
Uru na ọghọm dị n'ime ya iche iche
N'etiti uru nke Roses nke ụdị a, na mgbakwunye na ịma mma pụrụ iche, a pụrụ ime ka arụmọrụ pụta ìhè. Ọ mejupụtara n'eziokwu ahụ bụ na Mitchell rose anaghị atụ egwu ma mmiri ozuzo ma ọ bụ oge oyi ma na-alụ ọgụ nke ọma na ọrịa na ụmụ ahụhụ dị iche iche.
Dị Mkpa! Eddie Mitchell enwebeghị ntụpọ ọ bụla.
Osisi rose a ga - enwe ike iwere ọnọdụ ya ma kwanyere ugwu okike, o nwere ike ibu obere ogige ma obu nnukwu ahihia.
Na-eto n’elu akwa ifuru
Akọ ifuru: ka esi aku ahihia
Rose Blush (Blush) - nkọwa na akparamagwa nke ụdị dị iche iche
Eddy Mitchell bụ rose nke ma onye nwe ụlọ ama ma onye mbido nwere ike iku ya. Mana maka nke a, ị kwesịrị ịma ụzọ aghụghọ.
Rose na-akụ Eddie Mitchell
Kedụ ụdị eji abanye
Ọdịda nke ala bụ site na osisi. Enwere ike ịzụta sapling n'ụlọ ahịa ma ọ bụ nye ya iwu na ịntanetị. Ka mkpụrụ ahụ wee bido, ọ chọrọ nlekọta kwesiri ya.
Kedu oge bụ ọdịda
Agha mkpụrụ osisi na-eme n’etiti oge opupu ihe ubi, ọtụtụ mgbe n’April. Ihe kachasị mkpa maka ịhọrọ oge maka ọdịda bụ ikuku ikuku karịa ogo 10.
Attentionaa ntị! N'oge mgbụsị akwụkwọ, ha anaghị akụ, ebe ọ bụ na seedling agaghị enwe oge iji gbanye mgbọrọgwụ tupu mmalite nke ntu oyi.
Iji nwee mmasị na ịma mma nke ahịhịa amị a, a na-akụ ngwakọ Roses n'akụkụ windo ma ọ bụ na ifuru dị nso n'ụlọ. Mgbe ị na-ahọrọ ebe, ọ bara uru ịtụle na ụdị ndị a enweghị mmasị ụzarị anyanwụ. N'okpuru ụzarị ọkụ, ifuru nke ahịhịa ga-akpọnwụ, daa, ọ ga-anwụ. Ọ bụ ekwesighi ịkụnye Roses n'ebe ala dị oke mmiri.
Dị Mkpa! Ọdịmma na ọdịmma nke ifuru na-adabere n'ebe kwesịrị ekwesị.
Otu esi akwadebe ala na ifuru maka iku ahihia
Ala nke iku Eddie Mitchell ga-eme nri. Ọ bụrụ na ọ bụ ụrọ, mgbe ahụ ịkwesịrị ịme nri n'ụdị peat, humus, ma ọ bụ compost. Ọ bụrụ na ala bụ aja, mgbe ahụ, a na-agbakwunye ụrọ na nri. Acidity nke ụwa kwesịrị ịdị ntakịrị acidic, mụbaa acidity na nri, belata yana mgbakwunye nke ntụ.
Attentionaa ntị! Iji mee ka sapling ahụ ka mma, a na-atụ aro ka ọ jide ya na ngwọta pụrụ iche, nke enwere ike ịzụta ya na ụlọ ahịa ubi.
Nzọpụ usoro ala site na nzọụkwụ
Mgbe ahọpụtara ebe a ga-ahọrọ rose, ala a kwadebere, mgbe ahụ ị nwere ike ịga n'ihu ịkụ ihe:
Ọ dị mkpa igwu olulu nke nwere ihe dịka sentimita 50.
Ọzọ, wunye akwa nke ngwakọta nke gravel, okwute na gravel n'ime oghere.
Wụsakwa oyi akwa nke fatịlaịza.
Ọ dị mkpa iji fesaa ihe niile n’ala.
Wụsaa n’ala ahụ nke ọma.
Na-emeri n'ebe ahụ seedling.
Wụsa ụwa, belata ala ntakịrị.
Na-agba mmiri mkpụrụ.
Rosa Misty Bubbles - nkọwa nke ụdị ịchọ mma dị iche iche
Mgbe a kụrụ mkpụrụ, ka o were were nke ọma, ị ga-esoro iwu nlekọta.
Iwu mmiri na iru mmiri
Rosa kwesịrị ịchọrọ ịgba mmiri, karịsịa mgbe ihu igwe na-ekpo ọkụ n'èzí. N'oge ọkọchị, a na-agba mmiri ugboro abụọ n'izu na mmiri mmiri. N'oge mgbụsị akwụkwọ, a ga-agba ohia ahụ obere oge ma ọ bụ na ọ bụghị mgbe niile, dabere na ihu igwe.
Uwe elu na ala
Akwa akwa akwa Eddie Mitchell na-adabere n'oge afọ. N'oge opupu ihe ubi na ọkọchị, a na-enyeju ahịhịa ahụ nri fatịlaịza ndị dị ka: phosphorus, potassium, nitrogen. Ma na nmalite mgbụsị akwụkwọ, enwere ike ịmịcha ahịhịa naanị nri.
Emere mbadamba iji nweta ebumnuche abụọ:
nguzobe nke ihe mara mma nke oke ohia;
maka okooko osisi mara mma.
Enwere ụdị mkpụrụ osisi atọ, ha dabere n'oge afọ ole a na-eme ya:
N'oge ọkọchị, a na-ewepụ akụkụ ndị dara ada, nke a ka a na-akpọ kwachaa adịghị ike;
A na-eme kwachaa mmiri n'oge opupu ihe ubi iji megharia ohia ma belata ọnụ ọgụgụ nke buds gaa na mpempe 4 - nke a bụ kwachaa siri ike;
a na-emekwa ya n’oge opupu ihe ubi, a na-eme ya mma iji mee ka okooko osisi puo, bụ́ nke a na-ahapụ ube asaa, a na-akpọkwa ya obere okpete.
Njirimara nke ikuru ifuru
Mgbe okpomọkụ dara n'okpuru ogo 7 na temometa, ọ bụ oge iji dozie rose maka oge oyi. Nzọụkwụ mbụ bụ hilling, a na-eme ya tumadi na humus ma ọ bụ compost. Ọzọkwa, alaka ya na-ekpuchi alaka ya, a na-eme osisi site n'elu ma na-ekpo ọkụ maka rose na-agbatị n'elu ya.
Dị Mkpa! N'oge opupu ihe ubi, a na-emeghe okpomoku ka oge iji mee ka ohia ghara ịgbaze.
Roses na-efe efe
Rosa Princess Anne - nkọwa banyere ụdị dị iche iche
Enwere ike ịpụta Rose Eddie Mitchell na ahịhịa na-eto oge niile.
Oge ọrụ na izu ike
Rose na-eto ifuru n’oge ọkọchị ma na-akwụsị n’etiti ụbịa.
Nlekọta oge na mgbe ịghachara okooko osisi
Nlekọta okooko osisi ọkọlọtọ, ịgbara mmiri, ahịhịa na fatịlaịza. Mgbe itusichara, ifuru na-ama ifuru na-ete.
Blooming Rose Eddie Mitchell
Ihe ị ga - eme ma ọ bụrụ na oge ntoju, ihe ọ bụla nwere ike ibute ya
Rose Eddie Mitchell nwere ike ghara ito eto ma ọ bụrụ na-elekọta ya nke ọma na n’oge ọrịa. Iji maliteghachi okooko, ịkwesịrị ịghọta ihe kpatara ya ma mee usoro iji maliteghachi okooko.
Ntughari Eddie Mitchell bu nkpuru.
A na-egbute eso na oge opupu ihe ubi.
Maka kwachaa, onye na-akụ osisi na ngwaọrụ maka ihe ọkụkụ ka mma na-abịa n'aka.
Usoro nke omume mgbe ịkpụ:
Chọta Ome dị mma.
Bee alaka ya ka ha nwee ihe dika nkpuru osisi ise.
Hichaa ala nke mkpuru osisi site na akwukwo.
A na-eji akụkụ pụrụ iche maka uto ka mma idobe mkpụmkpụ nke aka ahụ.
A kụrụ azuokokoosisi n'ime ala wee kwụọ mmiri.
Ọrịa, ụmụ ahụhụ na ụzọ iji luso ha ọgụ
Roses Eddie Mitchell, dị ka ụdị ndị ọzọ, na-enwe mmasị imebi ụmụ ahụhụ dị ka aphids, akọrọ na earwigs. Ka ha ghara iwere osisi ahụ gbuo, a na-eji ifuru ahụhụ na-emeso ifuru ahụ.
Dị Mkpa! Maka mgbochi, a na-atụ aro ka agwọta ahịhịa ahụ na ngwọta prophylactic.
Rose Eddie Mitchell bụ ihe dị ịtụnanya nke, site na nlekọta kwesịrị ekwesị, ga-acha akwụkwọ ma mepụta okpukpo siri ike dị ka mmanụ ndị France.